Talaabooyin cusub oo ku wajehan Oslo iyo 24 degmo oo ku xeeran iyo fududeyn la sameeyay. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Talaabooyin cusub oo ku wajehan Oslo iyo 24 degmo oo ku xeeran...
Talaabooyin cusub oo ku wajehan Oslo iyo 24 degmo oo ku xeeran iyo fududeyn la sameeyay.
Xukuumada ayaa soo saartay Talaabooyin cusub oo lagu sii kordhinayo xayiraadii saarneyd qaar ka mid ah 24 degmo oo ku xeeran Degmada Oslo taas oo tirada guud ee degmooyinka ka dhigeysa 25 degmo kuwaasi oo la xiray todobaadkii la soo dhaafay kadib markii degmada Nordre Follo lagu arkay nuuca is bed bedala ee Feyru Ingiriinska.
Xayiradaan qaar ka mid ah Degmooyinkaani ayaa sii socon doona ilaa maalinta arbacada 03-02-2021, waxaana xiligaasi kadib xukuumadu ay xayiraada ka yareyn doonta 15 ka mid ah 25-kaas degmo halkas 10-ka soo haray oo loo kala qeybiyay 2 qeybood oo ah.
Sedaxda degmo Nordre Follo, Oslo iyo Ås ayaa la geliyay Sanduuqa koowaad kuwaas oo xayiraadu ay ku sii adkaan doonto. Waxaana sidii u sii xirnaan doona dhamaan goobihii la xiray. Halkaan ka aqri
Degmooyinka Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby iyo Våler oo laga dhigay sanduuqa Labaad ayaa laga qafiifinaya xayiraadaha bulshada ee saran iyadoo Isboortiga abaabulan dhaq dhaqaaqa xilliyada firaaqada loo oggolaaday carruurta iyo dadka waaweynba.
Xarumaha jimicsiga ayaa dib loo furi doonaa iyadoo loo ogolyahay in xarumahaasi ay ku jimacsadaan oo kaliya dadka ku nool degmada, halka maamulka xarumahaasina ay masuul ka ahaan doonaan hirgelinta nidaamyada ay ku hubinayaan dadka ku jimicsanaya goobahooda.
Iskuulada Dabaasha, koorsooyin dabaasha ee abaabulan iyo tababarada dabaasha ayaa loo ogolyahay caruurta iyo dhalinyarada da’doodu ka yar tahay 20 sano xirfadlauyaasha sare ee dabaasha.
Goobaha Maktabadaha ayaa dib loo furi doona halka Goobaha dadweynaha iyo meheradaha ee ay ka dhacaan abaabullada dhaqameed, ciyaaraha ee xilliyada firaaqada ay u furanyihiin Caruurta iyo dhalinyarada kayar 20 sano.
Dadka waaweyn ayaa lagula taliyay in aysan abaabulin dhaq dhaqaaqyada ciyaaraha ee lagu ciyaaro garoomada gudaha balse tababar ay ku sameyn karaan goobaha banaanka si ay macquul u noqoto in ay kala fogaadaan, wallow ciyaariyahanada xirfada sare loo ogolaaday in ay si caadi ah ugu tababartaan gudaha.
“ Ma qaadan karno Furasdo naga dhigaya bilaa koontarool” ayuu yiri Wasiirka Caafimaadka Norwey Bent Høie (H).
Bent Høie waxa uu intaasi ku daray in goobaha santarada ah ay sii xirnaan doona si looga hortago in dadku ay sameeyaan dhaq dhaqaaqyo badan.
Halkaan ka aqriso talaabooyinka iyagoo dhameystiran.TV2
Previous articleXukuumada Norwey oo soo saartay talaabooyin cusub iyo Ardeyda oo heli doonta Kaalmooyin dheeraad ah.
Next articleTurkish NGOs, lawyers meet Somali officials.